IUD - Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ
Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ > ကျွန်မတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် > IUD
သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း IUD ဆိုတာဘာလဲ။
သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း (IUD) ဆိုတာ အလွန်ထိရောက်မှုရှိပြီး (၅)နှစ်မှ(၁၀)နှစ်အထိ (အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍) ရေရှည်အသုံးဝင်သော သားဆက်ခြားနည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြေးနီအနည်းငယ် အုပ်ထားတဲ့ ပလတ်စတစ် IUDများသာ ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ (T)ပုံစံ၊ (Y)ပုံစံ မြင်းခွာပုံစံများရှိတတ်ကြပြီး သန္ဓေတားရန်အတွက် ယင်းကိရိယာကိုသားအိမ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့သာ IUDကိုထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ IUD တွေကို ဟော်မုန်းမပါဝင်တဲ့ အထိရောက်ဆုံးသန္ဓေတားနည်းအဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
မိမိရဲ့ IUD အဆင်ပြေပြေ ရှိနေရဲ့လားဆိုတာ သိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
သင့်ရဲ့ IUD ချော်ထွက်သွားပြီးလားဆိုတာ သိရအောင် သင့်ရဲ့IUD ကို လတိုင်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်ခဲပေမယ့် IUD ဟာ ဓမ္မတာလာနေစဉ်မှာ ချော်ထွက်သွားနိုင်ချေ အများဆုံးပါပဲ။ IUD တွေမှာ သူတို့ကိုစုချည်ထားတဲ့ ကြိုးလေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဓမ္မတာလာနေစဉ်အတွင်းမှာ အောက်ပါအဆင့်တွေ အတိုင်း ကြိုးလေးတွေကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အချက်ပြကိရိယာ (ဒါမှမဟုတ်) လက်ခလယ်ကို ယောနိလမ်းကြောင်းအတိုင်း သားအိမ်လည်တံကိုထိမိသည်အထိ ထည့်သွင်းပါ။ . သင့်သားအိမ်လည်တံဟာ သင့်နှာခေါင်းထိပ်မှာ ခံစားနေရသလိုမျိုး တူညီစွာ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ထွက်လာတဲ့ IUD ကြိုးအစအန များကို စမ်းကြည့်ပါ။ ယင်းကြိုးအစအနများကို ရှာတွေ့ပါက IUD ဟာနေရာတကျရှိနေပြီး ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အကယ်၍ ကြိုးဟာအရင်ထက် ပိုရှည်နေသလို (ဒါမှမဟုတ်) သားအိမ်လည်တံနှင့် ပြောင်းပြန်တည်ရှိနေတဲ့ IUD ၏ ပလက်စတစ် အမာပိုင်းကို စမ်းမိပါက IUD နေရာရွေ့သွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ IUD ချော်ထွက်သွားပါက (သို့မဟုတ်) နေရာရွေ့သွားပါက နေရာတကျဖြစ်အောင် မိမိဘာသာမိမိ ပြန်မထည့်ပါနဲ့။ သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူနှင့် တွေ့သည်အထိ သားဆက်ခြားရန် ကာကွယ်သည့်နည်းလမ်းကို သေချာစွာ အသုံးပြုပါ။
IUD ထည့်သွင်းထားစဉ်အတွင်း သားအိမ်ပေါက် သွားစေနိုင်ပါသလား။
သားအိမ်၌ကပ်နေခြင်း၊ သားအိမ်ကိုပေါက်သွားစေခြင်းတို့ဟာ အမျှိုးသမီးအယောက်တစ်ထောင်မှာ တစ်ယောက် (၀.၁%) သာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ IUD ရဲ့ချွန်ထက်မှုကြောင့် သားအိမ်ပေါက်သွားခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) တင်ပါးဆုံတစ်ဝိုက် ကြာရှည်စွာနာကျင်ခြင်းတွေ အများအားဖြင့် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ သားအိမ်ပေါက်သွားခြင်းဟာ ဖြစ်ခဲသော်လည်း IUD ထည့်သွင်းနေစဉ်အတွင်းနဲ့ ထည့်သွင်းပြီးမကြာမီအချိန်တွေမှာ အများဆုံးဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ သားအိမ်ပေါက်သွားပါက IUD ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သင့်ပါတယ်။ သားအိမ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းစေဖို့အတွက် IUD ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အကျွမ်းတ၀င်ရှိတဲ့ ဆရာဝန်(ဒါမှမဟုတ်)ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။သားအိမ်ပေါက်ခြင်းဟာ ဖြစ်ပွားနိုင်သော်လည်း အလွန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပွားခြင်းဟာ ဆီလျော်ကောင်းမွန်မှုမရှိတဲ့ ထည့်သွင်းမှုများကြောင့်သာဖြစ်တတ်ပြီး IUDမှာ ချို့ယွင်းချက်ရှိနေတာကြောင့် မဟုတ်ပါ။
မိမိရဲ့အဖော်က လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း IUD ကိုခံစားသိရှိနိုင်ပါသလား။
အစပိုင်းမှာတော့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ IUD ကြိုးတွေကို ထိတွေ့ခံစားရတယ်လို့ တချို့လိင်ဆက်ဆံဖော်တွေက ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီကြိုးတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပျော့ပျောင်းသွားလို့ ပြဿနာကြီးတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိမိနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အဖော်ဟာ တကယ့် IUD ကိုတော့ ထိတွေ့မခံစားရသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ခံစားမိတယ်ဆိုရင် သင့် IUD က သူ့နေရာနဲ့သူ အံဝင်ခွင်ကျရှိမနေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေးပေါ် အခြေအနေ မဟုတ်သေးတဲ့အချိန်မှာ သင့် IUD က နေရာတကျရှိနေရဲ့လားဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ စစ်ဆေးကြည့် သင့်ပါတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ မတွေ့သေးခင်ကာလမှာ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ခြင်း ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားသားဆက်ခြား အရန်နည်းလမ်းသုံးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
IUD ကို အလွယ်တကူ ထုတ်ယူချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တကယ်လို့IUDကို စောစောထုတ်ပစ်ချင်ရင်လည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သင့်ကျန်မာရေး စောင့်ရှောက်သူ (ဒါမှမဟုတ်) ဆရာဝန်ဆီမှာ IUD ကိုထုတ်ယူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေ အနေမျိုးမှာမှ မိမိဘာသာမိမိ IUD ကို မဖယ်ရှားပါနဲ့။
သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း IUD ဟာ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STIs) ကို ကာကွယ်ပေးပါသလား။
တိတိကျကျပြောရ မယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝကာကွယ် မပေးနိုင်ပါဘူး။STIကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အမျိုးသားသုံးကွန်းဒုံးကို အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ STIဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရလာမှာကို စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ IUD နှင့် ကွန်ဒုံးဖြင့်ကာကွယ်နည်း (၂)မျိုးလုံး အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ဒီလိုအသုံးပြုတာ ကြောင့်ဘာဆိုကျိုးမှမရှိပါဘူး။
IUD က မိမိရဲ့လိင်ဆက်ဆံဖော်ကို နာကျင်စေပါသလား။
IUD ကြိုးတွေက လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း သင့်လိင်ဆက်ဆံဖော်ကို နာကျင်စေတယ်ဆိုတာ ကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော် အများစုကတော့ နာကျင်မှုမခံစားကြရပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်လိင်ဆက်ဆံဖော်က IUDကြိုးတွေကို ခံစားမိနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ အချိန်ကြာ လာတာနဲ့အမျှ IUD ကြိုးတွေပျော့ပျောင်းသွားတဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်တာမျိုးရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်လိင်ဆက်ဆံဖော်ဟာ မသက်မသာခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူနှင့်တွေ့ပြီး IUD ကြိုးတွေအဆင်ပြေသွားအောင် ညှိသင့်ပါတယ်။
IUD ကို မိမိဘာသာ ထုတ်လိုက်ဖို့ အဆင်ပြေပါ့ မလား။
IUD ကို သင့်ဘာသာသင်ထုတ်ပစ်လို့မရပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရဲ့ အကူအညီမယူဘဲ သင့် IUD ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင် သင့် သားအိမ်၊သားအိမ်ခေါင်း သို့မဟုတ် မွေးလမ်းကြောင်းတလျှောက် ပျက်စီးတဲ့ရလဒ်တွေ ရလာနိုင်ပါတယ် ။သင့် IUD ကိုထုတ်ပစ်ချင်ပါက IUD ထုတ်ပေး နိုင်မယ့် ကျန်းမာရေး ပညာရှင်ဆီ သွားရောက်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားနည်းသည် နာကျင်စေပါသလား။
သားအိမ်တွင်းထည့် ပစ္စည်း (IUD) သည် တချို့အမျိုးသမီးတွေအတွက် နာကျင်မှုကို ပိုမိုခံစားရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုကတော့ အနာခံရပေမယ့် အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပညာရှင်များဟာ သားအိမ်တွင်းထည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပိုမို သက်တောင့်သက်သာရှိစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသားဆက်ခြားကိရိယာကို ထည့်သွင်းမယ် ဆိုပါက ၁၅ မိနစ်လောက်ခန့် နေရထိုင်ရအဆင်မပြေမှုကို ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ၁ ရက် ၊ ၂ ရက်လောက် အကြာခန့်အထိ အနည်းငယ် နာကျင်မှုကို ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source – http://bedsider.org/features/241-something-for-the-iud-insertion-pain
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာသည် ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာဟာ အရမ်းပဲသေးငယ်ပါတယ်။ ၃ စင်တီမီတာမှ ၃.၅ စင်တီမီတာလောက်ရှိပြီး လက်ဖဝါးထဲ ထည့်နိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ဖို့ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာသည် စိတ်ချရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ လုံးဝကို စိတ်ချရပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ထည့်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်ဆီ သွားရောက်ဖို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
Source – http://bedsider.org/questions/37-is-it-safe-to-have-an-iud-inside-me
သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကို ထုတ်ယူပြီးနောက် ဘယ်လောက်အကြာမှာ ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်မလဲ။
အိန္ဒိယမှာ ပြုလုပ်တဲ့လေ့လာမှုတွေအရ သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကို ထုတ်ပြီးနောက် အမျိုးသမီး ၈၃% ဟာ ၁ နှစ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၉၄% ဟာ ၂ နှစ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကို အသုံးပြုတာကြောင့် ဆိုးကျိုးတွေတော့ ရရှိစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Source – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3213675
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုဟာ အန္တရာယ်ရှိတယ် ပြီးတော့ ကူးဆက်ရောဂါတွေဖြစ်စေတယ်လို့ ကျွန်မ ကြားဖူးတယ်။ အဲ့ဒါ ဟုတ်ပါသလား။
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုဟာ အန္တရာယ်ရှိတယ် ပြီးတော့ ကူးဆက်ရောဂါတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ တော်တော်ကို မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ IUD ကို ပိုးသတ်ပြီးသား အိတ်တွေနဲ့သာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကိုင်တွယ်ထိရောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အညစ်အကြေးတွေ ကင်းရှင်းအောင် ကန့်သတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကူးဆက်ရောဂါတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လွဲမှားတဲ့ ညွှန်ကြားမှုနဲ့ အသုံးပြုခြင်း ဒါမှဟုတ် မွေးလမ်းကြောင်းအောက်ဘက်ပိုင်းနားကနေ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကို ထည့်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ပိုးမွှားတွေကို ခန္ဓာကိုယ်က ပုံမှန်အားဖြင့် ကူးဆက်ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် တားမြစ်ပေးပါတယ်။ ကူးဆက်ရောဂါတွေကို ဆရာဝန်တွေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာကာ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကိရိယာကို ပိုးမသတ်ရသေးတဲ့ အရာတွေနဲ့ မထိတွေ့စေခြင်း။ ပိုပြီး အန္တရာယ်ကင်းချင်ရင်တော့ မိမိပြသနေတဲ့ ဆရာဝန်ဟာ သန့်ရှင်းမှုနဲ့အညီ (ဥပမာ- လက်အိတ်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ဆေးခန်းသုံးကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်း၊ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကိရိယာကို မထည့်သွင်းမီ ကိုင်တွယ်မှု မပြုလုပ်ခြင်း) ပြုမူလုပ်ဆောင်မှု ရှိ စေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source – http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/contraception/myths/intrauterine-devices
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုပြုလုပ်ပြီး ဘယ်လောက်အကြာမှာ လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါသလဲ။
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကိရိယာကို ထည့်ပြီးတာနဲ့ သင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပြီုဖစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ ရက်အကြာမှသာ ယောနိလမ်းကြောင်းမှ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source – http://teenhealthsource.com/birthcontrol/copper-iud-details/
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကိရိယာအမျိုးအစားများကြား ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
ကြေးနီဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာ(IUD) ဟာ သေးငယ်တဲ့ ပလတ်စတစ်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကြေးနီကြိုးလေးများနဲ့ ကိရိယာကိုယ်ထည်ကို ရစ်ပတ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြေးနီ IUD တွေဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ ကော့ပါးပါဝင်မှုဟာ အမျိုးအစားပေါ်မှုတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လောလောဆယ်ရရှိတဲ့ ကော့ပါး သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာ အမျိုးအစား ၃ မျိုး ရှိပါတယ်။
T ပုံ သဏ္ဍာန် အမျိုးအစား
ဒီအမျိုးအစားကတော့ T ပုံ သဏ္ဍာန် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၀ နှစ်ကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သားဆက်ခြားဖို့အတွက် အကျိုးထိရောက်မှုအရှိဆုံး ရေရှည်သုံး ကိရိယာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးရိုးပုံ သဏ္ဍာန် အမျိုးအစား (Sleek)
ဒီအမျိုအစားကတော့ U ပုံ သဏ္ဍာန် အတံရှိပြီး အောက်ခြေမှာ ကြေးနီ ရစ်ပါတ်ထားပါတယ်။ သက်တမ်း ၅ နှစ်ခံပြီး ကလေးမယူဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပိန်ပါးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Y ပုံ သဏ္ဍာန် အမျိုးအစား
ဒီအမျိုးအစားကတော့ အောက်ခြေမှာ ကြေးနီပတ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပါက ၅ နှစ်အထိ ခံပြီး ထည့်သွင်းစဉ် နာကျင်မှုကို အနည်းဆုံး ခံစားရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source – https://bedsider.org/features/70-paragard-vs-mirena-which-iud-is-best-for-you
ကလေးမရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်က သားအိမ်ထဲ ထည့်ရတဲ့ သားဆက်ခြားပစ္စည်း (IUD) ကို အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
ကလေးမရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်က သားအိမ်ထဲထည့်ရတဲ့ သားဆက်ခြားပစ္စည်း (IUD) ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သားဆက်ခြားပစ္စည်းနေရာတကျမဖြစ်ပဲ အပြင်ဘက်ကို လျောကျလာနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတော့ ကလေးမွေးဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးထက်စာရင် ပိုများပါတယ်။ ဒါက ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကလေးမွေးဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ သားအိမ်ထက် ကလေးမမွေးဖူးသေးတဲ့အမျိုးသမီးသားအိမ်က ပိုပြီးသေးငယ်လို့ပါ။ ကလေးမရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ငါးရိုးပုံစံ သားဆက်ခြားပစ္စည်းတွေက ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံ သားဆက်ခြားပစ္စည်းတွေက သားအိမ်ပိုသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဒီဇိုင်းတီထွင်ထားတာကြောင့် ပြန်ထွက်လာနိုင်ချေ နည်းပါတယ်။
IUD ကြောင့် ဓမ္မတာလာစဉ် ပိုမိုနာကျင်တတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
ကြေးနီ IUD တွေဟာ သင့်ရာသီသွေးကို ပုံမှန်ထက်ပိုဆင်းစေပြီး ရာသီစက်ဝန်းအတွင်း ပိုမိုနာကျင်ကိုက်ခဲစေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ပြောင်းလဲနေတတ်ပြီး အမြဲတစေဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အများအားဖြင့် IUD ထည့်ပြီး ပထမ (၂) လမှာသာ ရာသီသွေး ပုံမှန်ထက် ပိုဆင်းတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မတာလာချိန် ရာသီစက်ဝန်းမှာ ပုံမှန်ထက် ပိုမိုနာကျင်ကိုက်ခဲကာ ရာသီသွေးပိုများပြီး မိမိရဲ့စိတ်ကို ကသိကအောက်ဖြစ်စေတယ်လို့ ခံစားရပါက သင့်အတွက် အခြားသားဆက်ခြားနည်းက ပိုမိုသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ရေရှည်သားဆက်ခြားနည်းတွေထဲမှာ လက်မောင်းတွင်းထိုးသွင်း သားဆက်ခြားကိရိယာ (Implant) ထိုးသွင်းခြင်းသည် အဆင်ပြေထိရောက်ပြီး အချိန်တို ကာလ အတွက် သားဆက်ခြားနည်းတွေထဲမှာ သုံးလခံသားဆက်ခြားဆေးထိုးခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) သားဆက်ခြားသောက်ဆေး တွေက ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာ (IUD) ဟာထည့်ထားတဲ့နေရာကနေ ရွှေ့သွားနိုင်ပါသလား။
ပုံမှန်အားဖြင့် သားအိမ်ခေါင်းတစ်လျှောက်မှာ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ရှုပ်စေမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သားဆက်ခြားဆေးတွေကို ဆက်လက်မီဝဲနေစရာ လိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အန္တရာယ်လည်း မများပါဘူး။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာဟာ သူ့လမ်းကြောင်းမှာ မဟုတ်ဘဲ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းကို ရောက်ရှိနိုင်ခြေက ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နည်းပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးကတော့ ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလို ဖြစ်လာရင် သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကို ပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို IUD ကြိုးစစ်ဆေးစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်လို့ သင်ဟာ IUD ကြိုးကို ခံစားနိုင်မယ် ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
Source – http://bedsider.org/en/questions/45-can-the-iud-move-out-of-place-or-fall-out-completely
သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကို ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်မှုတွေကို ပြုလုပ်စရာမလိုဘဲ ဆေးခန်းမှာ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကူးဆက်ရောဂါတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိ၊ မရှိ သေချာစေဖို့တွက် ဆေးခန်းက လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာ မထည့်သွင်းခင် ဆရာဝန်က မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်း ခွဲစိတ်ခန်းသုံး မှန်ကို ထားရှိမယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကို ကူးဆက်ရောဂါတွေက ကာကွယ်ဖို့ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ သန့်စင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ဆရာဝန်ဟာ သင့်သားအိမ်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ဆွဲဆံ့စေဇပြီးနောက် သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကို သေးသွယ်သော ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးဖန်ပြွန်ကို အသုံးပြုပြီး ထည့်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကို ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ ဖန်ပြွန်ချောင်းကို ပြန်လည် ထုတ်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာဟာ ဘယ်အချိန်မဆို ထည့်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဓမ္မတာလာတဲ့ အချိန် ထည့်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာ ထည့်သွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ၅ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်သာ ကြာပါတယ်။ ထည့်သွင်းပြီးရင်တော့ သင့် ဆရာဝန်ဆီ ၄ ပါတ်ကနေ ၆ ပါတ်အတွင်း သွားရောက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Source – http://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/810799/all-about-the-iud-process
IUD ထည့်သွင်းစဉ် ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုကို သက်သာစေတဲ့နည်းလမ်းများ ရှိပါသလား။
သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း (IUD) ထည့်သွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ ရေနွေးပုလင်းကိုသုံးပြီး (ဒါမှမဟုတ်) နာကျင်မှုသက်သာအောင် ဆရာဝန်ညွန်ကြားထားခြင်းမရှိတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး(အနက်ဂျက်ဆစ်) သောက်သုံးပြီး ပြုလုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သင်ရာသီလာချိန် သို့မဟုတ် သားဥကြွေနေခြင်းတို့ဖြစ်နေစဉ် သင့်သားအိမ်ခေါင်းဟာ ပိုပွင့်တာမို့ အဲ့အချိန်ထည့်တာပိုကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် (၅) နှစ်၊ (၁၀) လောက် လုံခြုံပြီး စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် (၁၅) မိနစ်လောက် မသက်မသာ ဖြစ်ခြင်းက ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်။
IUDဟာ သားအိမ်အပြင်ဖက်ကို ထွက်သွားတက်ပါသလား။
IUDဟာ နှလုံး၊ ဦးနှောက် (ဒါမှမဟုတ်) ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဆီကိုမှ မရောက်ရှိနိုင်ပါဘူး ။ သာမာန်အားဖြင့် IUD ဟာ အခွံအတွင်းက အစေ့လေးလိုမျိုး သားအိမ်အတွင်းမှာပဲ ရှိနေတာပါ။ IUDက သားအိမ်နံရံကို ဖောက်ထွက်ပြီး ဝမ်းခေါင်းထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဟာ အလွန်ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပွားတာမျိုးဟာ IUD ထည့်သွင်းစဉ်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့အမှားကြောင့်သာ ဖြစ်ပွားတတ်တာပါ။ သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ IUD ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းတွေဟာ ကူးစက်ခြင်း၊ IUD ကိုပြန်ထုတ်ပစ်ရခြင်း၊ သားအိမ်ပေါက်သွားခြင်းလိုမျိုး ပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။ IUD ထည့်သွင်းမှုကြောင့် ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီဘဲ ကွဲပြားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ IUD ထည့်သွင်းမှုကြောင့် ခံစားရတဲ့နာကျင်မှုကို လျော့ပါးစေတဲ့ဆေး မရှိပါဘူး။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို IUD မထည့်သွင်းမီ ကြိုတင်သောက်သုံးနိုင်ပြီး သင့်သားအိမ်လည်တံ ပွင့်နေတဲ့အချိန် ဥပမာအားဖြင့်- ဓမ္မတာလာနေချိန် (ဒါမှမဟုတ်) သားဥကြွေတဲ့အချိန်မှသာ IUD ကို သေသေချာချာထည့်သွင်းပါ။ IUD ထည့်သွင်းပြီး (၆) ပတ်အတွင်း (ဒါမှမဟုတ်) နောက်ပိုင်းမှာ သားအိမ်ပေါက်သွားပြီလို့ သံသယရှိပြီး လက္ခဏာတွေပြနေပါက ထိုသူကို IUD ဖယ်ထုတ်ရာမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာဝန်ဆီမှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ ခေါ်သွားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားနေရာမှာ နေရာလွဲပြီးရောက်ရှိနေတဲ့ IUD က ဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေတာကြောင့် ရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲ ထားလိုက်လို့ရပါတယ်။
ကြေးနီနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း IUD ဟာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သလဲ။
ကြေးနီ IUD ဟာ သုတ်ပိုး မမျိုးဥဆီမရောက်စေဘဲ သုတ်ပိုးကို သေစေခြင်း၊ သတ်ပစ်ခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
IUD ထည့်သွင်းပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင် သက်ရောက်မှု ရှိလာသလဲ။
ကြေးနီ IUD ကို ထည့်သွင်းပြီးနောက် ချက်ချင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
IUD ထည့်သွင်းထားပါက လိင်ဆက်ဆံလျှင် နာကျင်ပါသလား။
ထည့်သွင်းပြီးလျှင်ပြီးခြင်း အနည်းငယ်နာကျင်တတ်ပေမယ့် အချိန်ကြာလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ မနာကျင်တော့ပါ။ အချို့အမျိုးသမီးများဟာ IUD ထည့်ပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ရလာမည်လားဟု စိုးရိမ်ရန်မလိုသော ကြောင့် ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး လိင်ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။
IUD ထည့်ထားပါလျက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
IUD ထည့်ထားစဉ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ရရှိဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားရင် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူက သင့်သားအိမ်အပြင်ဘက်မှာသန္ဓေတည်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိ သွေးစစ်ခြင်း၊ ယောနိလမ်းကြောင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အာလ်ထရာဆောင်း ရိုက်ခြင်းတွေကို ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကိုယ်ဝန်က သားအိမ်အပြင်ဘက်မှာ သန္ဓေတည်နေခြင်း မဟုတ်ပါက ၎င်းကိုယ်ဝန်အားဆက်ဆောင်၊ မဆောင် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ တကယ်လို့ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူဟာ IUD ကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါက လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ IUD ကြိုးများကို မြင်နေရပါက မခွဲစိတ်ဘဲ IUD ကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မည်။ IUD က်ို ဖယ်ရှားပါက ကိုယ်ဝန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်ချေ အနည်းငယ်ရှိပြီး IUD ကိုဆက်ထည့်ထားပါက ရောဂါကူးစက် မှုများကြောင့် သင့်ကလေးကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ချေများပြီး သင့်ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ IUD ကိုအလွယ်တကူထုတ်၍ မရသောအခြေအနေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆက်ဆောင်ပါက သင့်အနေနဲ့ ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ IUD နေရာတကျရှိနေပါလျက် ကိုယ်ဝန်ရလာပါက ကလေးကိုလမစေ့ဘဲ မွေးဖွားရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို IUD ဟာနေရာမှာကျန်ခဲ့ပြီး ကလေးစောစောမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးဆို စိုးရိမ်ဖွယ်ပါပဲ။
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုသည် သားကြောပြတ်စေပါသလား။
မပြတ်စေပါဘူး။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကို ပြန်လည် ထုတ်လိုက်တာနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ပြန်လည် ရရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ မျိုးဥထုတ်လုပ်နိုင်မှု လျော့နည်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနအဆိုပြုချက်များအရ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကို အသုံးပြုဖူးသည့်အမျိုးသမီးများသည် မျိုးဥထုတ်လုပ်နိုင်မှု လျော့နည်းစေသည့်ဒါဏ်ကို ပုံမှန်အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုခံစားနိုင်မှု မရှိသည်ကို တွေ့ရှိထားကြပါတယ်။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကို အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ မပြုသည်ဖြစ်စေ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ တင်ပါးဆုံရိုးရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါဝေဒနာကို မကုသပါက မျိုးဥထုတ်လုပ်နိုင်မှုကို အနည်းနဲ့ အများ စွမ်းဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
Source – http://www.your-life.com/en/your-questions/intrauterine-device-iud/
သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာဟာ သားအိမ်အပြင်မှာ သန္ဓေတည်မှုကို ဖြစ်နိုင်စေပါသလား။
သားအိမ်အပြင်မှာ သန္ဓေတည်မှုဖြစ်ခြင်းကို သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားတာဟာ အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ သားအိမ်အပြင်မှာ သန္ဓေတည်မှု ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာ ပိုပိုပြီးတောင် ရှားပါးပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုဟာ သားအိမ်အပြင်တွင် သန္ဓေတည်မှုကို ဖြစ်စေမယ့် အခွင့်အရေးကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား သားဆက်ခြားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားတာကို အသုံးပြုသူများဟာ သားအိမ်အပြင်တွင် သန္ဓေတည်မှုဖြစ်စေမယ့် ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်နည်းပါတယ်။ ဘယ်သားဆက်ခြားခြင်းကိုမဆို အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ၁၀၀ မှာ ၆ ယောက်ကနေ ၈ ယောက်ထိ သားအိမ်အပြင်တွင် သန္ဓေတည်မှုကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်မှ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာဟာ စိတ်ချရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ စိတ်ချရပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကျင်းပတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံမှာ ဆရာဝန် ၉၀ % က အမေရိကန်တလွှားရှိ အမျိုးသမီးများကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ရာ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုသည် မည်သည့်အသက်အရွယ်အတွက်မဆို စိတ်ချနိုင်ပါတယ်လို့ အဆိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်သည့် သားဆက်ခြားမှုဟာ အခြားသော သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေထက် ပိုပြီး အကျိုးရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
Source – http://bedsider.org/questions/255-are-iuds-safe-for-women-who-haven-t-had-kids?tag=iud
ကျွန်မအမျိုးသားက သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြား ကိရိယာကို အသုံးမပြုစေချင်ဘူး။ သူ့ကို ဘယ်လို နားချသင့်သလဲ။
အမျိုးသားအများစုဟာ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုအကြောင်းကို မသိကြပါဘူး။ သင့်လက်တွဲဖော်အဆင်ပြေအောင် လုပ်စရာတစ်နည်းပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုအကြောင်းနဲ့ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကိရိယာက ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်နေရာမှာ ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြခြင်းပါပဲ။ သင် ဆရာဝန်နဲ့ သွားတွေ့တဲ့အခါ သူ့ကိုပါ ခေါ်သွားလိုက်ရင် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သူ ပိုမို သိရှိနိုင်မှာပါ။ နှစ်တွေအကြာကြီးအသုံးပြုလို့ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စုံတွဲအများစုကတော့ သူတိုိ့ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကို သိကြလို့ ပိုပြီးတော့တောင် စိတ်ချလက်ချ လိင်ဆက်ဆံကြပါတယ်။
Source – Dr. Mie Mie Ko
ကြေးနီနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ သားအိမ်ထဲထည့် သားဆက်ခြား ကိရိယာ (IUD) ဟာ ကော့ပါးဆိပ်တက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသလား။
သင်ဟာ ကြေးနီနဲ့ ဓါတ်တည့်တယ်ဆိုရင်တော့ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြား ကိရိယာ (IUD) က ကော့ပါးဆိပ်တက်မှုကို ဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သားအိမ်တွင်း ထည့် သားဆက်ခြားမှုကိရိယာမှာပါဝင်တဲ့ ကြေးနီဟာ သွေးထဲကို စီးဝင်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားကိရိယာကြောင့် သွေးထဲကော့ပါးပါဝင်မှုဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကော့ပါးပါဝင်မှု အတူတူပဲ ဖြစ်စေမှာပါ။
IUD တွေက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေပါသလား?
IUD တွေက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျအောင် မလုပ်ဆောင်ပေးပါ။ IUD တွေက သန္ဓေ အောင်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကြေးနီ IUD တွေက သုက်သေဆေးတွေလို သုက်ကောင်တွေကို သတ်ပေးပြီး သားဥတွေဆီ မရောက်တော့တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ လက်ရှိ သက်သေပြချက်များအရ IUD က သန္ဓေမအောင်ခင် သုက်ပိုးကို သတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်ဆိုတာက သန္ဓေအောင်ပြီးမှသာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် IUD က ကိုယ်ဝန်ပျက်မကျစေပါ။
IUD ထုတ်လိုက်တာက တော်တော်လေး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် IUD ထည့်တာထက် ပိုမြန် ပိုလွယ် နာကျင်မှု ပိုနည်းပါတယ်။